Ny Fiangonana Jesosy Mamonjy dia fiangonana kristiana miorina eto Madagasikara sady efa miely any ivelany koa. Niorina ara-panjakana tamin'ny 1963 teto Madagasikara ny Fiangonana Jesosy Mamonjy taorian'ny asa fitoriana Filazantsara nataon'ny Misionera Amerikana Mounir Aziz Daoud sy Jane Collins vadiny. Tao Ankorondrano, Antananarivo Madagasikara no misy ny foibeny. Manana fiangonana miorina manodidina ny 1000 izy amin'izao taona 2019 izao ary manana mpitandrina sy mpianatra ao amin'ny Sekoly ara-Baiboly ary mpino mihoatra ny 2000, miara-miasa, mitandrina amin'ireo fiangonana ireo sy ny zanam-piangonana tsy mbola nahavita trano. Efa miparitaka manerana izao tontolo izao ny mpino Jesosy Mamonjy amin' izao fotoana izao izay miezaka manokatra fiangonana hivavahana sy mitaona ny mpiray monina aminy hiara-manompo an'Andriamanitra. Noho izany dia efa misy Fiangonana Jesosy Mamonjy ny any Frantsa sy any Mayotte, nefa kosa dia marobe ireo zanaky ny fiangonana miparitaka manerantany, any Alemaina, Kamerona, Afrika Atsimo, Sina, Japàna, Etazonia, La Réunion sns. Taorian'ireo fiangonana lehibe, ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagaskara, ny Eglizy Katolika Romana, ny Fiangonana Loterana Malagasy, izay efa nisy teto Madagasikara tamin'ny vanim-potoana faha mpanjaka, dia ny Fiangonana Jesosy Mamonjy no fiangonana tranainy indrindra niorina teto taorian'ny Ady Lehibe Faharoa. Manaraka ireo fiangonan-dehibe dia izy no manana Trano fivavahana sy mpino maro indrindra eto Madagasikara.
8 Loharano sy fanamarihana
Ny Misionera Mounir Aziz Daoud sy Jane Collins vadinyHanova
Fitoriana filazantsara teny FenoarivoHanova
Teny Fenoarivo, tanàna mihataka an'Antananarivo no nanombohany ny fitoriana Filazantsara, toerana famonoana omby (Abbatoir) io toerana io, tsy dia madio loatra, nefa satria tsy tian'ny fanjakana hanelingelina teo an-tanana izy ireo ary nanehoana endrika fanilikilihana dia teny no nanomezana ny alalana hanao ny asa fitoriana. Tsy araka izay noheverina anefa fa tonga maro dia maro ny olona, nanolo-tena hiasa ny fitaterana, ary nahavory olona niaraka tamin'ny fahagagana marobe sy ny herin'Andriamanitra izy mivady, satria nisy jamba maro nahiratra, ny kilemaina tonga nitovy ny tongony, ny moana niteny, ny marenina lasa nandre, ny nalemy nitsangana teo no ho eo, hitan'ny olona rehetra, ary aretina sy olona azon'ny devoly maro no sitrana sy afaka. Ankoatra izany dia olona maro no tonga nandoro ny odiny ka nanolo-tena ho an'Andriamanitra.
Nanorina ny Fiangonana Jesosy MamonjyHanova
Tanjona sy antom-pisian'ny Fiangonana Jesosy MamonjyHanova
Fampielezana ny Filazantsara mitohyHanova
Fibebahana sy fahaterahana indrayHanova
Ny Baiboly no foto-pampianarana ijoroan'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy sady toriny nefa manana boky manazava ny Baiboly izy dia ny Boky Maintso (dikateny malagasy) ary ny Red Book (dikateny anglisy). Ireo boky ireo no mirakitra ny fampianaran'ny misionera Daoud mivady sady manoro lalana "ny fomba hianarana feno ny Baiboly", izay nosoratan'izy mivady ihany ary ampiasaina amin'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy rehetra sy ny fiangonana hafa manovo ny fampianaran'izy ireo.
Manana ny fihiràny manokana ny Fiangonana Jesosy Mamonjy, fihirana nadika avy amin'ny fihiràn-dRamatoa Daoud ary vokarina sy atonta ao amin'ny Literatiora Jesosy Mamonjy ihany, dia ny Song Book, "Songs with a message", hira nangoniny sy nofantenana avy tamin'ireo hira fifohazana tranainy. Ankoatra izany kosa dia manana departemanta manokana ho amin'ny famoronan-kira ny Fiangonana Jesosy Mamonjy.
Manana programa Fampianarana ny Sekoly Alahady ho an'ny ankizy ny fiangonana rehetra miorina izay fomba hitaomana ny ankizy ho an'i Jesosy sy ahafahana mitory ny tenin'Andriamanitra ho azy ireo. Ny anabavy Daoud ihany koa no nanomboka sy nampita ny fomba fampianarana Sekoly Alahady. Koa ny Mpampianatra dia olona voafidy sy mandray fiofanana isan-kerinandro.
Sekoly tsy miankina amin'ny fanjakanaHanova
Fitohizan'ny asan'ny Fiangonana Jesosy MamonjyHanova
Ny Pastora RATAFY Léon no Filohan'ny Filan-kevi-pitantanana sady miandraikitra ny Filohan'ny Fiangonana Jesosy Mamonjy nanomboka ny taona 2003 ka hatramin'izao (2019)
Efa manenika ny 400 ny isan'ny mpitandrina matihanina afa-tsy ny evanjelisitra, ny Mpianatra ho mpitandrina ary ny Mpino mitondra fivoriana.
Mihoatra ny 1600 kosa ny isan'ny Fiangonana mielim-patrana manerana ny nosy sy any ivelany.
Lalamasaka hatry ny elaHanova
↑ Efa misy Fiangonana Jesosy Mamonjy maromaro azo karohina ao amin'ny Google Maps, na miditra amin'ny Site an'ny Lalamasaka Hatry ny Ela raha te hitady ny toerana misy Fiangonana.
↑ Jereo ao amin'ny Site Web an'ny lalamasaka ny Article: "Fahagagana sy Misiona"
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Fiangonana_Jesosy_Mamonjy&oldid=980939"
Dernière modification le 22 Martsa 2020, à 19:19
Voaova farany tamin'ny 22 Martsa 2020 amin'ny 19:19 ity pejy ity.